Tulips - omunye izimbali amahle kakhulu futhi enkulu, etshalwa ezweni lethu. Inkinga nje wukuthi thermophilic zawo ezilinganiselwe, yingakho ezindaweni ezisenyakatho kungenzeka ezinye ubunzima kulinywe yabo.
Ngaphezu kwalokho, ukutshala Tulips ekwindla eSiberia futhi zonke kungaba ajabhise ngisho balimi kuqhathaniswa abanolwazi, ukuthi ngempela kukhona ukukhuluma mayelana kulezi zifiki. Sisuke sizibeka esimweni umsebenzi njengoba kulula ngangokunokwenzeka futhi kufinyeleleke kakhudlwana ukukutshela mayelana nenqubo.
By the way, kungani kudingeka ukutshala ekwindla? Hhayi okunengqondo ukukwenza entwasahlobo? Zonke ngalolu daba zomzimba zom futhi engavamile kulezi izitshalo. Okokuqala, labo Tulips ukuthi yatshalwa entwasahlobo ziqala eziqhakaza kamuva kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ukutshala Tulips iwe eSiberia ezinhle ngaleso sikhathi iqhwa ukuncibilika ama Awakening, njengoba isiginali ekuqaleni izimbali kanye ukuhluma kuyinto Ukupholisa nje ezijulile.
Kubalulekile kakhulu ngaphambi kokutshala ngokucophelela ukhethe kuphela ama eqinile kakhulu futhi unempilo. Uma phakathi imbewu ziyokuwa izimo ugula, hhayi kuphela uthole umbala evamile, kodwa bonke bangakwazi ulahlekelwe. Ngaphezu kwalokho, ama-tulip baphathwe isixazululo ezibuthakathaka potassium permanganate nezidakamizwa antifungal.
Iqala kanjalo-ke ukutshala Tulips ekwindla eSiberia. Ngaphambi kwalokhu kusengaphambili, khetha indawo elikhanyayo kakhulu kusayithi. Kumele uvikelekile ezintweni umoya, kodwa lokhu kwanda kungase kungabi okuqhubekayo, kusukela emoyeni yokujama tsi kuholela ezifweni fungal.
Qaphela ukuthi umhlabathi ungqimba evundile kufanele abe ukushuba okungenani 35 cm, ngoba izimbali kakhulu ebucayi kule ipharamitha ukuphi. Yiqiniso, ama ngaphambi kokutshala kufanele kube nendlela umbe, unezela humus emhlabathini, umquba kanye nokhuni umlotha.
I kakhulu ekwindla zokutshala Tulips eSiberia lizisho ukulungiselela ukutshala izimbobo le hhayi ngaphansi kuka-15 cm ukujula, ngaphandle kwalokho bamane vymerznut kule ebusika nokhahlo yalesi sifunda. Kakhulu bangcwabe hhayi kunomvuzo: e isibani kungase kungabi sokunqoba ukukhula e amandla ngokweqile ungqimba obukhulu emhlabeni.
Phakathi izimbobo eduze kufanele ashiye okungenani 10 cm yesikhala samahhala. Uma ama ezincane, ibanga kungenzeka mfushane. Qaphela ukuthi Tulips ukuwa zokutshala eSiberia uyonika imiphumela emihle kakhulu uma watshala imbewu ezinkulu phakathi, "dubbing" kuye ezinhlangothini ama ezincane. Kulokhu, izitshalo ezinkulu ngeke ukuvimba ukukhanya izihlobo zabo ezincane, futhi bheka, laqanjwa enjalo kungaba obunobunye okuningi.
Kule umbono, ukuwohloka okunengqondo kakhulu of Tulips, utshalwe ngasemanzini zilwane, ngoba esikhathini esizayo ngabo kuyoba lula kakhulu ukuba banakekele. Ngakho, ukutshala Tulips eSiberia kuhilela ukunamathela hhayi kuphela okuqinile izindlela zokulima, kodwa futhi enengqondo bekuhlela ne indawo isakhiwo.
Ungakhohlwa ukuthi emigodini iqhwa abathanda ukuhamba igundane. Unganqikazi: tulip bona uzokubona, ukuze akusho ubuhlungu welulele emhlabeni imithombo anobuthi ukudla okuhlukahlukene. Kungcono ukukwenza emva iqhwa lokuqala, umane tucking kubo ngaphansi kwaso, njengoba kungenjalo kungase ubuthi ezifuywayo.
Ngakho oyifundile mayelana nendlela ukwenza zokutshala Tulips ebusika!
Verbena Ukhohlwe: ukutshala nokunakekela izitshalo
Izitshalo ngoba florariuma: uhlu
Kungani sinesithakazelo ngakho emlandweni zingadedeli?
Izikhwama tindilinga amnyama ngaphansi kwamehlo akhe, indlela ukuhlanza? Amathuluzi, amathiphu, iseluleko
Indlela ndizela Vietnam kusuka eMoscow? ongakhetha ahlukahlukene